10 Ezona ziqhekezayo zeSixeko eYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 10 Ezona ziqhekezayo zeSixeko eYurophu
IYurophu ihlala isikhumbuza ngeHollywood yakudala kunye nobukumkani. Ngaloo ndlela, Uqhekeko lwesixeko kwenye yeedolophu ezintle zaseYurophu zihlala zithetha ngezinto ezintle ebomini. Indawo yokutyela entle, isiko, kunye nembali nge-twist ekhethekileyo kunye noyilo oluthatha umoya wethu kude, zizinto ezimbalwa nje ezenza iYurophu iphupha.
Ukusuka kwiilwandle zaseNice ukuya kwindawo yesibhakabhaka eVienna, zethu 10 Okona kuphambili kwesixeko eYurophu kuya kudlula okona kulindeleyo.
Ukuhamba ngololiwe yindlela ye-Eco-yobuhlobo eya eYurophu. Eli nqaku ibhalwe ukuba afunde Train Travel yi Gcina A Isitimela, Engambi Train Amatikiti Website In The World.
1. Ezona ziqhekezayo zeSixeko eYurophu: Vienna, Ostriya
Ukuba kuphela nge-Sachertorte, Itshokolethi yesidala itshokhoala, ngokuqinisekileyo kufuneka uqaphele iVienna yokuqhekeka kwesixeko sakho eYurophu. Phakathi evekini okanye ngeempelaveki ezinde, I-Vienna ibonelela ngokubonakalayo okunomdla kunye nemibono yesixeko esiya kuthatha umphefumlo wakho.
Qala kwiKahlenberg ukusuka apho ubona yonke indlela ukuya kwiiCarpathians zaseSlovakia. Emva koko qhubekeka ukuya kwisiqithi sase-Danube kwisiqithi sepikicha kunye nokuya ezantsi eVienna ukuya eFranziskanerplatz isikwere ukusela ikofu yaseViennese kwiposikhadi. Vala usuku kunye ne-cocktails kwi-Das Loft bar yesibhakabhaka kwaye udibanise nabemi.
Oku kuphela kwezinto ezimbalwa ezizodwa ekufuneka uzenze eVienna ukuba ufuna ukuchitha isixeko sakho uqhekeze eVienna njenge-Viennese eyinyani.
2. Imibala, Fransi
Iphakathi kweSwitzerland neJamani, kufutshane nommandla weRhine entle eFransi, IColmar yidolophu ench enomdla nenomdla. Kungenxa yoko le nto esi sixeko sesinye sezona ndlela zokuqhekezwa kwesixeko eYurophu. Ngenxa yobukhulu bayo obuncinci kunye nobutyebi 1000 Imbali yaseYurophu eyongeza kwimeko yayo yemilingo, ngokuqinisekileyo uya kuwa eluthandweni ekuboneni kokuqala kwaye ubuye uhlale ixesha elide.
Umzuzu wokufika kwakho eColmar uya kuthi ngokukhawuleza uve ngathi ungenile kwindawo yabantwana. Indlela echanekileyo yokuchitha ikhefu kwisixeko sakho eYurophu kukubhadula ezitratweni ukuya kwiVenice encinci, yeka i iglasi yewayini, I-Alsace ekhethekileyo.
I-Colmar ilungele ikhefu lesixeko seKrisimesi kwaye intle kakhulu ngempelaveki.
I-Paris ukuya ku-Colmar ngoLoliwe
I-Zurich ukuya kwiColmar ngoLoliwe
Stuttgart ukuya Colmar ngoLoliwe
I-Luxembourg ukuya kwiColmar ngoLoliwe
3. Ezona ziqhekezayo zeSixeko eYurophu: Venice, ElamaTaliyane
Iibhlorho, izindlu ezingaqhelekanga nezimibalabala, ivumba lepitsa kunye neAperol, yenza iVenice a indawo yokuphupha ikhefu kwisixeko eYurophu. Ubungakanani bayo obuncinci, olondolozo lwembali, kwaye ukukhanya kuya kukugcina uxakekile ixesha elide kunye elifutshane leveki. Kuhlala kukho i-piazza encinci nje kwikona ukusuka kwiziko elixakekileyo, indawo onokuhlala kuyo, yi cappuccino kunye nepaniini, okanye ziphathe i-pizza emnandi ebhakwe kwisitovu samandulo.
Ukuba ucwangcisa ukuphuma impelaveki impelaveki, iziqithi ezithandekayo zaseBurano naseMurano kukukhwela nje isikhephe.
UMilan ukuya eVenice ngololiwe
Padua ukuya eVenice ngololiwe
Bologna ukuya eVenice ngololiwe
IRoma ukuya eVenice ngololiwe
4. Ezona ziqhekezayo zeSixeko eYurophu: Intle, Fransi
Akukho nto eyonwabisayo ngaphandle kohambo olukhawulezayo oluya e-French Riviera ngempelaveki. I-Nice entle kunye nonxweme lwayo ziyindawo entle yokuphumla okwakulibaleka kwisixeko sasehlotyeni eYurophu.
I-Cote D'Azur yindawo yeelwandle ezihle kakhulu eNice kwaye iLa Tour Bellanda ayifanekelwa kuphoswa kwezo posikhadi izimvo kunye nokutshona kwelanga. Ikhefu lesixeko eNice limalunga nokuhlala kamnandi nokutya okumnandi. ke, impelaveki eNice izakwenza uzive ngathi usebukhosini.
Ayikwazi ukuya eParis ngoLoliwe
IiCannes eziya eLyon ngoLoliwe
5. Amsterdam, elamaDatshi
Into yokuqala efika engqondweni xa umntu ucinga ngokuqhekeka kwesixeko eAmsterdam sisithili sezibane ezibomvu, ngesithuthuthu, kunye nemijelo. kodwa, esi sixeko sincinci saseYurophu sinokuningi okunokunikezela.
Ngexesha lasentwasahlobo iAmsterdam iyaqhakaza ngemibala enemibala kwaye kuyo yonke indawo ojika ujongeka ngathi yiposikhadi. Imisele, izikhephe, Happy, kunye neentyatyambo zilinde ukufaka imibala kwi-albhamu yakho yefoto. Qala kwimyuziyam yeTulip uze ungene kwiJordaan, i-maze yeefestile kunye neevenkile ezincinci zasekuhlaleni, okanye iipaki zeOost kunye neRembrandt ze ipikniki kunye nokuphumla.
IBrussels ukuya eAmsterdam ngoLoliwe
Berlin ukuya eAmsterdam ngoLoliwe
I-Paris ukuya eAmsterdam ngoLoliwe
6. Ezona ziqhekezayo zeSixeko eYurophu: Cinque Terre, ElamaTaliyane
ICinque Terre liqela 5 anemibala kwaye iilali ezintle kwaye ngokuqinisekileyo iya kuba lolunye lweendlela eziqhekezayo zesixeko ozithathayo ebomini bakho. Ekwindla nasebusika, I-Cinque Terre yinto entle yokulala, kodwa ehlotyeni kuyaphithizela njengasiphi na isixeko saseYurophu. Enkulu kakhulu Inzuzo yeCinque Terre ngokuthelekisa iidolophu zaseYurophu kukuba ungahamba ngokulula kwaye undwendwele 5 iilali ezingaphantsi 3 iintsuku. ngoko ke, Ukuhamba ngololiwe eCinque Terre kulula kakhulu kwaye kulungile ukuba ungahamba kuzo zonke iilali ezingaphantsi 20 imizuzu.
Ukuhlala ematyeni kwaye ujonge ulwandle ngeelwandle ezintle, ICinque Terre yinto entle kakhulu. Ngaphezu, zininzi iikhefi, zokudlela, izimvo, yaye bentaba Ukulungela nayiphi na incasa. ke, ukuba ufuna ukuphumla ngeglasi ye wayini izidiliya zalapha ekhaya okanye ufumane adventurous, ke ukugqobhoza isixeko eCinque Terre kukulungele.
ILa Spezia eseManarola ngololiwe
I-Riomaggiore ukuya eManarola ngololiwe
USarzana eManarola ngololiwe
ILevanto kuManarola ngololiwe
7. Prague, Umphakathi waseCzech
Iigadi zeebhiya, iipaki eziluhlaza, izimvo ezihlasimlis 'umzimba, kunye neendibano zokungena ngaphakathi, yenza iPrague idolophu efanelekileyo eYurophu. IPrague likhaya kwiinqaba ezinomtsalane, imbali, Iimarike zalapha ekhaya, kunye neekhefi apho ungabamba ikofu kunye ne-pastry ukuya kwaye ube nepikniki kwenye yeepaki zayo ezininzi. kwakhona, zininzi iindawo ezifihliweyo nezinendawo entle yokujonga nokuthintela inkitha yabakhenkethi.
IPrague yindawo edume ngokuqhekeza isixeko eYurophu, nangona inokuxinana kakhulu unyaka wonke. kodwa, kusafanelekile ukutyelelwa impelaveki. Umzuzu wokuphuma kuloliwe, uya kuthandana nothando kunye nesi elihle emzini.
8. Ezona ziqhekezayo zeSixeko eYurophu: Brussels, Bheljiyam
Ukuba unezinyo elimnandi, Uya kuba neholide yokuqhekeza isixeko eBrussels. IBrussels inokuninzi kakhulu ukuba yabelane kwaye ikubonise, njengoyolo itshokholethi owaziwayo kwihlabathi kunye ne-waffles. Ukwengeza, engaphezulu kwe 100 iimyuziyam zikulindile eBrussels. Emva kokundwendwela okona kungcono unokuya kwi-rue uDanseart ngoluma ukuba utye kwindawo zokutyela ezilungileyo. Olunye ubutyebi eBrussels yindawo enomtsalane Indawo iSainte-Catherine kunye ne-chic kunye nenkcubeko Chatelain.
I-Brussels iya kukuvuyela ukukubamba ngequbuliso leveki elifutshane okanye ende. Yisixeko esinemimandla eyahlukeneyo enomtsalane kunye nesitayile nabani na nangaliphi na ixesha anxibelelana naso.
ILuxembourg ukuya eBrussels ngoLoliwe
IAntwerp eya eBrussels ngoLoliwe
IAmsterdam eya eBrussels ngoLoliwe
I-Paris ukuya eBrussels ngoLoliwe
9. Hamburg, Jemani
Idolophu yesibini ngobukhulu eJamani yenye yezona ndawo zintle zokuqhekeza isixeko eYurophu. IHamburg likhaya kwezibuko elikhulu lelizwe kunye namachibi angaphakathi nangaphandle kwe-Alster, apho ungonwabela khona a ukukhwela isikhephe esimangalisayo.
UPloten un Blomen yigadi ye-botanic eneembono ezintle kunye neendawo zemifanekiso. ke, ungcono upakishe ikhamera yakho kwaye ulungele ezinye i-shots ezinkulu ukuba wabelane ngazo kwiholide yakho emangalisayo eHamburg.
I-Zurich ukuya eHamburg ngoLoliwe
Ukujikeleza eRotterdam ukuya eHamburg ngololiwe
10. Ezona ziqhekezayo zeSixeko eYurophu: Budapest, Hangari
Enye yezona zinto zilungileyo zenziwayo eBudapest kukuhamba ngesikhephe xa usiya eDanube. Eyona ndlela yokuncoma umzi kunye nolwakhiwo lwaseBudapest ngesikhephe. Ngemisebenzi emihle yangaphandle nangaphandle, Ingxowankulu yaseHungary inqaku eliphezulu kumphezulu wethu 10 ezona zixeko ziqhekezayo eYurophu.
Ukujonga iibhlorho, Ndwendwela iibhedi zesintu zokuhlamba, kwaye ungcamle i-cuisine yaseHungary zizinto ekufuneka uyenzile ukuze uzive ngathi uyindawo yaseBudapest. kwakhona, Qiniseka ukuba undwendwela uMati Ibandla, Indawo yokuloba, kunye nePalamente ngokubona kwelanga kwesixeko.
Apha Gcina A Isitimela, siya kukuvuyela ukukunceda ufumane amatikiti asezantsi kakhulu kaloliwe nakweyiphi na indawo entle ekuza kuyo!
Ngaba uyafuna ukusibetisa iposti yebhlog yethu "Iidolophu ezi-10 eziBalaseleyo zeSixeko eYurophu" kwisiza sakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-city-breaks-europe%2F%3Flang%3Dxh ‎– (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
citybreak mzantsiba citybreaks summertraintravel UkuhambaBudapest ukhenketho UkutyaPrague
Qeqesha ukuhamba iBritane, Ukuhamba ngololiwe eTshayina, Qeqesha uhambo eFrance, Train Travel Holland, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe eSwitzerland, Train Travel The Netherlands, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe